Ogaden News Agency (ONA) – Goosashadii Fayisa Lilesa oo Indhaha Caalamka Soo Jeedisay.
Goosashadii Fayisa Lilesa oo Indhaha Caalamka Soo Jeedisay.
Posted by Dulmane	/ August 31, 2016
Orodyahankii kagoostay Itoobiya ee wadamada aduunka waydiistay magangaliyda ayaa furay wado fursad u ah dad badan oo ku dhibaataysan dibada iyo gudaha Itoobiya waxayna dunidu si wayn u xaqiijisay in ay dhibaatooyin qabaan dadka ku hoos jira xukunka TPLF.
Fayisa Lilesa ayaa kadib markuu ku guulaystay kaalinta labaab ee Orodidii kasocday wadanka Barazil wuxuu bixiyay calaamada ay caanka kuyihiin dadka kacdoon wadayaasha ah ee Oromada ah wuxuuna warbaahinta usheegay in ay naftiisu khatar kujirto kuna laaban karin Itoobiya isagoo intaas raaciyay in laxasuuqayo shacabka Oromia kudhaqan.
Fayisa Lilesa ayaa sidoo kale indhaha caalamka kusoo jeediyay dad badan oo xukuumada wayaanaha kasoo cararay waxayna arintaasu soo dadajisay in laxaqiijiyay dhibka kajira Itoobiya, Sidoo kale Orodyahan kan waxaa lasocday taageerayaal iyo Orodyahano kale oo Itoobiya ay kasoo wada amba baxeen kuwaas oo dhamaan tood isu dhiibay wadamada ree galbeedka.
Arintan ayaa sumcad xumo wayn ku noqotay dowlada gumaysiga Itoobiya waxayna Itoobiya noqotay dowlada kaliya ee shakhsiyaadka ay ciyaaraha udirsadaan ay isu dhiibaan wadamada loodiro kuwaas oo dhamaantood sheegta in ay naftoodu khatar gali doonto hadii ay kulaabtaan Itoobiya.
Ma aha markii ugu horaysay ee ciyaar yahan ama siyaasi caan ah ay kagoostaan Itoobiya balse isdhiibka Fayisa Lilesa ayaa ah mid soo jiidatay dareenka caalamka.